Aariin Oromo bara hedduuf ukaamamaa ture Sadaa2015 kaasee xaxa’uun sagalee guddaan anga’e. Erga jaarraa 16faa takkaa seenaa Oromoo keessatt lakkoobsi hammana gahu hiree ofiif akkas waliin ka’ee hin beeku. Dhahii nolaa akka isa kanaa harka duwwaa tokkummaan ka’ee diina meeshaa ammayyaa hanga ilkaaniitt hidhate fi loltuu jajjabee angawoo addunyaan leenjifame didhchisiisee hin beeku. Takkaa akka si’anaa sabich gad of horde yeroo dheeraa akkasiif utuu hin mitiqin fuula du’aa, hidhaa fi guraarama dura dhaabbatee hin beeku. Sirna dooyyaa garegox fi tokoshanii kan mana Oromo hundatt time cabsan. Waggoota dhibbaa oliif boona dhabe deebisanii gonfachiisuu saaniif Oromoon, warraaqxota jannoota kanaaf galataa fi kabaja guddaa qabu. Annisaa warraaqsa akkasiin hanga Wayyaaneen xaxattee kan saamte hunda duubatt dhiiftee Tigrayitt galtutt boodatt deebiin hin jiraatu. Wayyaaneen ilkaan socha’ee, buqqa’u malee falli hin jiru. Lafti Oromiyaa fi wanti irra jiru kanuma Oromiyaati, fudhattee deemuu hin dandeessuu. Baankiin alaa qabeenya TPLF/EPRDF fi kanneen hidhata bu’aa waliin qaban saamanii kuufatan yeroo ummatoonni Empayera Itophiyaa bonaa fi jeejeen dorsifaman kan dabarsee kennuuf hin jiraatu. Kanneen milla suphee Wayyaanee ilaaluu didanii waliin meshebelluu eegalaniif, harkatt burkutooftee ba’aan rakkachuuf deemuun hin oolu haa beekkatanii! Erga ofii badanii hogganooti Afrikaa horii saamicha akkasiitiin ala baafatan, fooqiin dhossaan ijaarratan isaan haa tahanii warri saanii argatanii hin beekanii. Nagaa naannaaf jedhame Wayyanee karaa fedheen haa tahu gara hiree akka sanaatt reebamuu qabdi.